Ọrụ CNC machining / Nweta Ntanetị CNC Quant / Metal & Plastic - Createproto Tech Co., Ltd.
Akaebe nke echiche
Ule Arụ Ọrụ
Eletrọniki Ndị Ahịa
Kedu ihe kpatara Creatproto
Ọrụ / CNC machining
Chọta kacha mma dabara CNC machining ọrụ maka gị plastic na metal akụkụ, na-emepụta na-anapụta na-ina.
Short for Computer Numerical Control, CNC bụ akpaaka nke akụrụngwa akụrụngwa site na kọmpụta na-ewepụta sọftụwia etinyere tupu oge ahụ. Igwe CNC bụ ezigbo maka otu akụkụ akụkụ otu akụkụ yana ọ dị na ịkpụzi ihe ngọngọ ọ bụla dịka data 3D CAD gị.
CreateProto na-enye CNC milling, CNC ntụgharị, mkpọpu ala na ịme ọpịpị maka ọtụtụ ihe, dị ka igwe na-arụ ọrụ ma ọ bụ plastic plastic. Igwe ngwangwa CNC na-arụ ọrụ kachasị mma maka ịmegharị ngwa ngwa, ịmalite na nnwale kwesịrị ekwesị, jigs na ihe ndozi, na akụrụngwa arụ ọrụ maka ngwa ojiji.
Ọrụ Mgbasa Ozi CNC na China
A na-eji CNC ngwa ngwa na-emepụta ihe dị iche iche na-emepụta ihe na plastik, nke na-enye ndị otu imewe gị aka ịkpụzi ngwa ngwa na ọrụ ikpeazụ, yana na-egosi ịdị adị nke akụkụ anụ ahụ na ọrụ nhịahụ ma ọ bụ nke mgbagwoju anya, ma nye ohere ahụ gbanwee ma bulite imewe.
Na omenala-ahazi CNC-egwe ọka igwe na CNC mbịne lathes, ọ simplifies na streamlines anyị CNC machining Filiks. Ọrụ anyị dị elu nke CNC na-aga n'ihu na-agbaso usoro ihe omume ndị na-achọsi ike nke ndị ahịa ka anyị nwee ike ijikwa ọrụ nke prototyping na ịkpụzi ọrụ dị iche iche chọrọ ihe pụrụ iche, akụkụ dị mgbagwoju anya, na arụmọrụ kachasị mma.
3-axis igwe maka obere mmepụta na-agba ma ọ bụ dị mfe mmiri, na-agbanwe agbanwe 4, 5-axis CNC igwe ọrụ nhazi maka nkenke machined akụkụ, na kachasị workflows nke NC mmemme na ngwá ọrụ ụzọ, niile na-aga karịa omenala setups na machining omume, ma hụ na anyị na- ịrụ mgbagwoju prototype machining aga-eme na oge. Mụtakwuo ngwa ngwa ngwa ngwa anyị, ị nwere ike bulite faịlụ CAD n'efu ebe ahụ.
CNC Plastic machined Akụkụ
Ọ bụ ezie na enweghị nkọwapụta zuru oke nke nkenke nkenke plastik, anyị na-ahazi ya ma na-arụkwa ya n'ụzọ ziri ezi ma na-ewepụta akụkụ ndị na-ama aka na usoro nke jiometrị, nnabata dị elu, nghọta doro anya na ụdị dị iche iche. CNC plastic machining dị nnọọ iche na ọla machining. Ihe dị iche iche na-abịa na nsogbu dị iche iche, ya mere ọ chọrọ ụzọ dị iche iche maka nhọrọ nke ngwaọrụ, usoro ndị na-agba ọsọ, na usoro ịme ihe igwe.
Izu ụkpụrụ ndị a chọrọ akụrụngwa dị elu, na igwe arụmọrụ dị elu, akụrụngwa na ndị na-egbutu ya, mmemme na nhazi nke ọma, ahụmịhe na ọdịbendị nke naanị ịnakwere ogo kachasị elu. N'ime usoro nhazi niile anyị na-eduzi nyocha usoro nyocha iji mee ka ewuli mma ma kwado ya n'akụkụ niile. Anyị bụ ndị ọkachamara na a vasatail nso nke usoro na ụzọ nke omenala plastic machining.
Ewezuga ahụmịhe bara ụba na ịkpụzi ihe ndị dị na plastik, Createproto na-enyekwa ọrụ igwe CNC nke na-ezute nkọwa ọ bụla dị mgbagwoju anya. Ọ gụnyere ịtụgharị, egwe ọka, mkpọpu ala na ịme ọpịpị maka ihe ọla dị iche iche.
Imirikiti akụkụ CNC bụ nke akara dị iche iche nke aluminom, alloy magnesium, zinc alloy, carbon steel, steel steel, copper or brass. Metfọdụ ọla nwere atụmatụ, dị ka ụzọ awara awara akụkụ, nwere ike isi ike igwe ma ọ nwere ike ịgụnye iji EDM ma ọ bụ waya EDM.
Anyị nyochaa gị imewe ịnabata ọ bụla pụrụ iche fixturing na machining azum eji na-emepụta gị akụkụ na a nnọọ ezi uche na-eri. Anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke abụọ dịka anodizing, eserese, mkpuchi ntụ ntụ, ọgwụgwọ okpomọkụ, ọgbụgba ájá na polishing. Elu anyị gwụchara akụkụ CNC iji kwado ebumnuche mara mma nke nwere ike wepu akara ọrụ.
5-Axis CNC igwe ikike
Mgbe a kpọtụrụ aha igwe 5-axis ọkọlọtọ, ọ na-ezo aka na ọnụ ọgụgụ ntụzịaka nke ihe ọkụkụ nwere ike ịkwaga, na mgbe etinyere ngwa ọrụ ịcha ahụ na-agafe axes X, Y na Z ma na-atụgharị na axes A na B, n'otu oge -egwe ọka na ịkpụzi, na na elu-edu elu machined imecha. Nke a na-enye ohere akụkụ dị mgbagwoju anya ma dị mgbagwoju anya ma ọ bụ akụkụ nwere ọtụtụ akụkụ nwere ike hazie ya ruo akụkụ ise nke otu akụkụ na otu ntọala. Nke a na-akwado ndị injinia imepụta ihe iji hazie akụkụ dị iche iche na nnabata siri ike nke nwere ike ime ka arụmọrụ na arụmọrụ nke ngwaahịa ikpeazụ na-enweghị usoro nwere oke.
Dika otutu akuku ndi emeputara na ulo ahia ndi choro uzo ise, ndi nkpuru uzo 5 na oru ndi mmadu choro otutu ngwa di iche iche na otutu ulo oru ndi ozo tinyere ulo oru ugbo elu, ulo oru ugbo ala, ulo oru ugbo ala na ndi oru mmeputa ike. . Njirimara igwe na-aru oru mejuputara uzo di elu karie, idozi uzo, na oge mbu ma obu imeputa uzo di egwu nye ohere ahia ohuru.
Uru nke 5-axis CNC igwe
Elu-edu elu imecha: Ọ ga-ekwe omume ịmepụta akụkụ ndị a na-ejikarị arụ ọrụ dị elu site na iji ndị na-egbu ihe dị mkpụmkpụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, nke nwere ike belata ụda nke na-emekarị mgbe ị na-arụzi oghere miri emi na usoro 3-axis. Ọ na-eme ka ezigbo elu gwụchaa mgbe ị na-arụ ọrụ.
Ikwenye ziri ezi: 5-axis imekotaotuugbo egwe ọka na machining aghọwo oké mkpa ma ọ bụrụ na gị okokụre ngwaahịa ga-rube isi ike àgwà na arụmọrụ ọkọlọtọ. 5-CNC CNC axis na-ewepụ mkpa ọ dị ịkwaga mpempe ọrụ n'etiti ọtụtụ ebe ọrụ, si otú ahụ belata ihe ize ndụ nke njehie.
Obere oge ndu: Ike nke igwe 5-axis rụpụtara na-ebute oge mmepụta, nke na-atụgharị n'ime oge ndapụta dị mkpirikpi maka mmepụta ma e jiri ya tụnyere igwe 3-axis.
Omenala nke nwere obere mpịakọta CNC
Ngwongwo CNC nke nwere obere olu bụ otu mgbakwunye n'etiti prototyping na mmepụta ihe, ọ dị mma ebumnuche maka usoro nzọ ahịa na ule ahịa. Nlụpụta na obere mpịakọta na CNC machining bụkwa otu ezigbo nyocha nyocha maka ọbịbịa mmepụta usoro. Dabere na nke a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekpebi iji mmepụta nke dị ala n'ihi na ọ na-enweta ngwaahịa na ahịa ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, ọ nwekwara ike ịmepụta ohere karịa maka mmelite na ngwaahịa dabere na nzaghachi nke ojiji.
Site ngwangwa prototype ka ala-olu mmepụta, a ogbo aghọwo a development na-emekarị na CNC machining ọrụ taa. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị na ngwa ngwa ngwa ngwa nke ọtụtụ ndị na-emepụta ngwa ngwa, kamakwa ọ na-ebelata ihe ize ndụ na imezi mgbanwe imewe ma na-echekwa oge mmepụta na ọnụahịa.
Ngwakọta nke akụrụngwa kachasị elu na ahụmịhe na-enweghị atụ na ahụmịhe nke ndị otu anyị na-enye anyị nnukwu ọnụ ọgụgụ maka obere mmepụta mmepụta ngwa ngwa.
Ruo ọtụtụ afọ, Anyị jeere ndị ahịa ozi site na ụlọ ọrụ dịgasị iche iche site n'ichepụta akụkụ dị elu, nkenke na-egwe ọka. Anyị na-enye ma omenala CNC prototyping ọrụ na ala olu machining ọrụ na anyị ọkachamara technology.
Anyị bụ n'ezie gị onye-nkwụsị ọrụ na China niile nke gị machining oru. Ma ị chọrọ akụkụ dị mfe, ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ ọtụtụ akụkụ dị iche iche, Createproto na-eguzo n'akụkụ gị iji jikwaa ngwakọta nke akụkụ na olu ọ bụla.
IkeProto ikike maka CNC machining Services
CreateProto nwere otu ndị na-emepụta CNC nke ndị injinia ọkachamara na ndị ọrụ igwe iji belata nrụpụta nrụpụta, bulie mmemme CNC, belata oge ịkpụzi oge, meziwanye elu, yabụ anyị nwere ike hụ na akụkụ dị iche iche na-apụta na nsonaazụ ngwaahịa kachasị mma, ndị otu anyị na-arụ ọrụ na-agbaso ụkpụrụ siri ike mgbe ọ bịara n'ịdị mma na nlebara anya na nkọwa.
Igwe 3-axis na 5-axis CNC igwe na-akwado ndị otu ka ha nwee ọsọ ọsọ nke CNC plastic machining na CNC metal machining iche iche na ngwa ngwa, a na-arụ akụkụ ahụ niile na ụlọ ọrụ anyị nwere, nke nye anyị njikwa zuru oke site na imewe iji rụpụta usoro ọrụ CNC anyị.
Igwe CNC bụ otu n'ime usoro kachasị dị egwu n'ichepụta ihe, site na ngwa ngwa na-emepụta ngwa ngwa na akụkụ ụgbọ ala na mbara igwe. Inwe afọ ojuju dị iche iche ndị ahịa gafee ụlọ ọrụ mmepụta ihe, CreateProto nwetara nnukwu ahụmịhe na ihe ọmụma sara mbara banyere otu esi eme akụkụ dịka ihe nkọwa ndị ahịa rịọrọ, ma ghọta mkpa ọ dị na nnyefe oge. Na CreateProto, ị nwere ike ịnweta ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa nke CNC nke ụbọchị 3-9.
Ihe ị na - enweghị ike ịhụ dị mkpa, na CreateProto, ọ bụghị naanị na anyị na - emepụta akụkụ dị elu, mana anyị egosipụtakwala akụ CNC iji nye ndị ọrụ anyị njikwa ọrụ, na-enye ndụmọdụ kwesịrị ekwesị maka imewe maka imepụta, iji nyere gị aka imewe nke ọma. mmalite ogbo. Ndi otu oru ngo anyi kacha mma n’uwa. Nchịkwa zuru ezu nke imewe na n'ichepụta ihe pụtara na ọ bụ naanị otu ebe a ga-aza ajụjụ. Kwesighi ịga ọtụtụ ụlọ ọrụ iji nweta enyemaka ị chọrọ. Ọzọkwa, usoro nlekọta ndị ahịa anyị zuru ezu na-akwado ndị na-emepụta anyị ka ha wee nwee ike ịrụ ọrụ ha nke ọma na n'ụzọ zuru oke. Ọ bụrụ na ị nwere mbipụta ọ bụla, anyị na-eme ya.
Ndidi & Akụrụngwa CNC machining Tolerances
A na-etinye ndidi na -emepụta ihe gbasara DIN-ISO-2768 (ọkara) maka plastik arụ ọrụ na DIN-ISO-2768 (ezi) maka igwe eji arụ ọrụ. Dịka, anyị nwere ike ijide nnabata ngwa ọrụ site na +/- 0.005 "(+/- 0.125mm) na +/- 0.002" (+/- 0.05mm). A na-atụ aro akụkụ ndị ahụ ka ha sie ike karịa 0.02 "(0.5mm) na mpaghara niile ma achọrọ oke akụkụ dị elu karịa 0.04" (1.0mm). Ọ bụrụ na achọrọ nnweta siri ike, a ga-ekwupụta ihe ọmụma banyere akụkụ dị iche iche chọrọ oke dị warara, enwere ike itinye ntachi anya geometric na eserese maka akụkụ ahụ. Ndidi na-emetụta akụkụ dị ukwuu na ụdị ihe onwunwe. Ndị njikwa ọrụ anyị ga-akpọtụrụ gị n'akụkụ ọ bụla nke ọrụ gị ma nyekwa gị ogo kachasị dị oke mma. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ndidi ka sie ike nwere ike ịkpata ụgwọ ọzọ n'ihi ụba mkpofu, ntinye ọzọ, na / ma ọ bụ ngwaọrụ nlele pụrụ iche. Zọ kachasị mma iji kwado nnabata bụ naanị itinye mgbatị na / ma ọ bụ jịmetrị jiometrị na mpaghara ndị dị egwu, nke ga - enyere aka belata ọnụahịa.
Nhọrọ Ngwaọrụ CNC
ABS - (Natural / Black / Ire ọkụ Retardant)
Ngwakọta ABS / PC
PC / Polycarbonate - (Clear / Black)
PMMA / Acrylic - (Clear / Nwa)
PA / naịlọn - (Natural / Black / 30% GF)
PP / Polypropylene - (Eke / Black / 20% GF)
POM / Acetal / Delrin - (Nwa / White)
Epoxy Ngwá Ọrụ Board
Aluminom - (6061/6063/7075/5052…)
Uru & Ngwa
Uru nke CNC machining
Nhọrọ zuru oke nke ihe, ọ dịghị mkpa imebi ihe akụrụngwa n'ihi na akụkụ nwere ike ịbụ igwe ọrụ CNC site na injin plastik na ọla.
Ukwuu ziri ezi na repeatable, CNC machining na-enye ohere maka elu ziri ezi na magburu onwe ya elu imecha na / ma ọ bụ nkọwa.
Ntughari ngwa ngwa, a pụrụ iji igwe CNC rụọ ọrụ 24 awa kwa ụbọchị, na-agbanyụ maka mmezi.
Ego maka obere oge nke mmepụta akụkụ nke chọrọ ịrụ ọrụ dịgasị iche iche. Mpịakọta ọnụ ọgụgụ site na otu ruo 100,000.
Prototypes n'ozuzu buru ibu na nnukwu akụkụ bụ echekwa site CNC prototyping jiri ya tụnyere ngwa ngwa prototyping usoro n'ihi na ọtụtụ n'ime RP proprietary ihe ndị dị oké ọnụ.
Prototype Machining Ngwa
Visual Model (Concept or Exhibit)
Production-mezuwo Plastic Prototypes
Prototyping Oversized Parts
Ihe ndozi & Ngwaọrụ
Studydị Ọmụmụ Ahịa
Nhọrọ Nduzi Ihe
Nhọrọ Nhọrọ Teknụzụ
CREATEPROTO RAPID usoro AKW LKWỌ
ISO 9001: 2015 AH CR.
Otito Prototyping na Manufacturing, Fast Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Otito Prototyping, CNC Prototyping, CNC Rapid Prototyping,
Banye iji nweta n'ichepụta na mmelite!